TV လာလာဖွင့်တဲ့ သူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » TV လာလာဖွင့်တဲ့ သူ
TV လာလာဖွင့်တဲ့ သူ
Posted by etone on Oct 7, 2011 in My Dear Diary | 32 comments
ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြားသာ ကြားဖူးပြီး …တွေ့ကြုံ … မြင်ဖူးခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့… ယုတ္တိမရှိသော ဖြစ်ရပ်တစ်ခု တစ်သက်နှင့်တစ်ကိုယ် ကြုံခွင့်ရလိုက်တာ ကံကောင်းတယ်လို့ ခေါ်မလား ၊ ကံဆိုးတယ်လို့ပဲ သတ်မှတ်ရမလား မဝေခွဲတတ်အောင်ပါပဲ … ။ မမြင်ဖူးတာ ၊ မကြုံဖူးတာ တွေ့ခွင့်ရတာကြောင့် …အမှတ်တရ အဖြစ်ရှိနေခဲ့တာပါ … ။
ကျွန်မငယ်ငယ်က မှင်စာ ခြောက်သံလေး ကြားဖူးခဲ့တဲ့ အကြောင်း ရေးခဲ့ဖူးပါတယ် … ။ http://myanmargazette.net/29674/creative-writing/drama-essays-humor-memoirs-novel-excerpts-short-stories
ပထမဆုံး အတွေ့ကြုံအဖြစ် နားနဲ့ ဆက်ဆက်ကြားခဲ့ရသော်လည်း … မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ မြင်ဖူးခဲ့ခြင်းမရှိပါ … ။ ယခုအကြိမ်တွင်တော့ … နှဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ကြုံခဲ့ရပါပြီ … ။ ကြုံတွေ့ချိန်မှာ ကြောက်လန့်ရမယ့်အစား … ပျော်စရာ တစ်ခုလို ထင်မှတ်နေခဲ့တာ .. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင် အံ့သြမိပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်က …ကျွန်မ အဖွားဖြစ်သူအိမ်အလည်ပတ်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ် … လူကြီးတွေပဲ ရှိပြီး ကလေး မရှိတဲ့ အိမ်မို့ … အရာရာတိုင်းဟာ တိတ်ဆိတ်နေတာပေါ့ … ။ နေ့ခင်း နေ့လည် အပြင်ထွက်တဲ့လူကလည်း ထွက် ၊ အိမ်ကလည်း ကားသံ လူသံသိပ်မဆူတဲ့ နေရာကြောင့် …. ကျွန်မအတွက်တော့ … နေ့ခင်းနေ့လည် အိပ်စက်အနားယူလို့ ကောင်းတဲ့ နေရာပါပဲ … ။ (နှောက်ယှက်မဲ့ လူမှ မရှိတာကိုး )
အဖွားဖြစ်သူက ထမင်းစားပြီး အခန်းထဲဝင် ခဏလှဲနေတုန်း ကျွန်မလည်း အိပ်ချင်လာတာနဲ့ … ဧည့်ခန်းထဲက ဆိုဖာဆက်တီပေါ် ခဏလှဲအိပ်နေတုန်း … မှေးခနဲ အိပ်ပျော်သွားတယ် … အိပ်ပျော်သွားလို့ .. ခဏလေးပဲ ကြာချိန်ရှိသေးတယ် … တီဗွီကြီးရဲ့ ဂွီဂွီ ဂွမ်ဂွမ် အသံကြောင့် နိုးထသွားရပါတော့တယ် … ။ ဆူညံပွက်လောရိုက်နေတဲ့ တီဗွီကြီးလည်း …ပွင့်နေတယ် … MRTV4ရုပ်သံလိုင်းလည်း လာနေတာ ကြားရတော့ … အံ့သြသွားတယ် .. အဖွားတော့ ငါအိပ်နေတာကို အနုနည်းနဲ့ လာနှိပ်စက်တယ်အထင်နဲ့ …. အဖွားအခန်းထဲ ပြေးကြည့်တော့လည်း … အိပ်မောကျနေသံကြားရပါတယ် … ။ တစ်ယောက်ယောက်ဝင်လာရအောင်လည်း တံခါးက ပိတ်လျှက်သားပါ … သေချာအောင် အိမ်သာပါမကျန် တခန်းဝင်တခန်းထွက် ဘယ်သူများ အိမ်ထဲရှိမလဲ လိုက်ရှာသေးတယ် … ။ မတွေ့တော့ .. ဒေါသထွက်တာပဲ ရှိတယ် … ကြောက်စိတ်မ၀င်မိပါဘူး … ။ အိပ်ရင်းနဲ့ ရီမုများ ဖိမိသလား ပြန်တွေးတော့လည်း … ရီမုက အဝေးကြီးမှာ … ။ ကျွန်မလည်း စဉ်းစားရကြပ်လာတာကြောင့် မတွေးပဲ ထပ်အိပ်မယ်ဆိုပြီး … ခုဏကနေရာမှာ လှဲအိပ်လိုက်မိပြန်တယ် …. ။ တီဗွီကိုလည်း ပြန်ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ် … ။
မျက်လုံးလေး မှေးစင်းပြီး … သုံးလေး မိနစ်ပဲ ရှိသေးတယ် .. တီဗွီက တစခန်းထလာပြန်ပါရေ …. ။ ကျွန်မတို့ အိမ်သားတွေ တီဗွီဖွင့်လျှင် ခုနှစ်အိမ်ကြား ရှစ်အိမ်ကြား ဖွင့်ရမှာ အရမ်းကို ရှက်ပါတယ် ….။ ဒါကြောင့် တစ်ကိုယ်စာပဲ ကြားရုံလောက်လေး ဖွင့်ကြတယ်လေ …. ယခု ပေါ်ထွက်လာတဲ့ တီဗွီအသံက အသံအဆုံးနည်းပါ မြင့်ထားတာပါ …. ။ စိတ်ထဲ သံသယတော့ ၀င်လာပေမဲ့… ကြောက်ရကောင်းမှန်း မသိသေးဘူး … ။ ကျွန်မအိပ်တာကို နှောင့်ယှက်ချင်တာဖြစ်မယ်လို့ တွေးပြီး … စိတ်ထဲ နည်းနည်း အချဉ်ပေါက်လာတာနဲ့ .. ရီမုကို အနားယူပြီူး ပြန်လှဲအိပ်လိုက်ပါတယ် … တီဗွီကိုလည်း ပိန်ထားလိုက်တယ် …. ။
ဒီတစ်ခါတော့ လှဲချပြီးပြီးချင်းပဲ … ဂွီ ဂွီ ဂွမ်ဂွမ်က ကြားရပြန်ပြီ …. ဒေါသကလည်း ထွက်လာပြီမို့..ပါးစပ်ကလည်း နင်ကပဲ ဖွင့်နိုင်မလား ..ငါကပဲ ပိတ်နိုင်မလားလို့ … ပြောလည်းပြော …လက်ကလည်း ရီမုကို ကိုင်ပြီး … ပြန်ပိတ် … လှဲရုံလေးလှဲရသေး …တစ်ခါ ထပ်ပြန်ဖြစ်ပြန်တာနဲ့ … ပြန်မလှဲတော့ပဲ … ငုတ်တုတ်လေးထိုင် ပြီး … တီဗွီကိုပဲ ကြည့်နေပါတော့တယ် … ကျွန်မ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေလို့လား မသိဘူး …. တီဗွီက ပြန်မပွင့်လာတော့ပါဘူး … ။
ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်နေတော့ … နောက်ဖေးက အိုးသံခွက်သံ ကြားတာကြောင့် … ကြောင်အိမ်ထဲ ထည့်မအုပ်မိပဲ …. ဟင်းလင်းထားခဲ့တဲ့ … ၀က်ခြေထောက်စွပ်ပြုတ် ၀ယ်ထားတဲ့ ပန်းကန်သတိရပြီး အပြေးသွားမိတော့.. ပန်းကန်ကြီးကို မှောက်လို့ပါပဲ …. ။ ကျွန်မ အဖွားအိမ်မှာ ကြောင်မမွေးထားတာ သိပေမယ့်… တီဗွီနဲ့ ဆက်စပ်နေမှန်းတော့ မသိဘူးပေါ့ … ။ ကြောင်မဟုတ်လည်း ကြွက်ဖြစ်မယ်တွေးမိပြီး … ပွစိပွစိရေရွတ်ရင်း မှောက်နေတဲ့ နေရာနဲ့ …ထည့်ထားတဲ့ ပန်းကန်ကို ဆေးကြော သန့်စင် ရပါတယ် …. ပန်းကန်ဆေးတာတောင် မပြီးသေးဘူး … တီဗွီကြီးတခါ ပြန်ပွင့်နေပြန်ရော … ။ အဲ့ဒီအခါမှ ကျွန်မလည်း …. ကြွက်မှောက်တာမဟုတ်ပဲ တစ်ယောက်ယောက် ၀င်သောင်းကျန်းနေတာ နားလည် မိသွားတော့တယ် … ။ စိတ်ထဲလည်း နည်းနည်း ကြက်သီးထသလို ဖြစ်လာမိတယ် … မတော်လို့… မီးဖိုချောင်က အိုးခွက်တစ်ခုခုနဲ့ လှမ်းပေါက်လျှင် ခေါင်းကွဲနိုင်တာကိုး … ။ ကြက်သီးထပါတယ်ဆိုမှ … ကြောက်စိတ်ပါဝင်လာပြီး … လူတကိုယ်လုံး ပူရှိန်းရှိန်းဖြစ်နေတော့တယ် … နောက်ဖေး မီးဖိုထဲမှာလည်း ဆက်မနေရဲ … ဧည့်ခန်းထဲလည်း ပြန်မထွက်ရဲပဲ …တီဗွီကြီးကလည်း ခုနှစ်အိမ်ကြား ရှစ်အိမ်ကြား ပြန်မပိတ်ရဲဖြစ်နေတော့တယ် …. ။
တီဗွီသံ ပွက်ပွက်ညံနေတာ ငါးမိနစ်လောက်ရှိမှ အဖွားဖြစ်သူ ထလာပြီး … တီဗွီ ခုနှစ်အိမ်ကြား ရှစ်အိမ်ကြားဖွင့်ထားတာကို လာဆူတော့တယ် … အဖွားအားကိုးနဲ့ မီးဖိုခန်းကထွက် .. တီဗွီသွားပိတ်ပြီး .. ပလပ်ပေါက်ပါ ဆွဲဖြုတ်လိုက်ရတော့တယ် … ။ အဖွားဖြစ်သူကတော့ …ကျွန်မအဖြစ်ကို သိဟန်မတူပဲ … ဒီကလေး တစ်ခါတစ်လေ လာလည်တာတောင် အိမ်ခန်းထဲ ၀င်လိုက် ပြန်ထွက်လိုက် ၊ တီဗွီ ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်နဲ့ .. စိတ်ကို မငြိမ်ဘူးဆိုပြီး … ဘလိုင်းချည်း အသားလွတ်ကောသွားပါသေးတယ် … ။
ကျွန်မပယောဂမပါပဲ ..ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ဖြစ်ရတဲ့တီဗွီကြီးကိုလည်း ဒေါသထွက်ရပါတယ် … ။ ဒါပြင့် မစားရ မသောက်ရ မှောက်သွားတဲ့ ပန်းကန်ကိုလည်း …. အပြစ်တင်မိပါတယ် … ဒီထက်ပိုဆိုးတာတော့ … အဖွားအခန်းထဲ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက် ခေါက်တုံ့ ခေါက်ပြန် လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့ .. .မမြင်ရတဲ့ ဟိုဒင်းကိုလည်း မုန်းမိပါတယ် … ။ ဘလိုင်းကြီး ကောသွားတဲ့ အဖွားဖြစ်သူကိုလည်း တင်းမိတယ် …. ။ အဖြစ်ပျက်များစွာကို တစ်ဦးတည်းက လုပ်နေခြင်းလား … တခြား တစ်ဦးရော ပါဝင်ပတ်သတ်နေလား ဆိုတာကတော့ … မမြင်ရတဲ့ ဟိုဒင်းတွေမှပဲ သိပါလိမ့်မယ် … ။
ထူပူနေတာနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ မေ့သွားခဲ့တယ် .. . မှတ်တမ်းသာ တင်ထားလျှင် ဂူးဂဲလ်က ပုံတွေလို အရိပ်များပေါ်မလားလို့လေ :D
အဲဒါ ဆေးရုံကနေ ပြန်တော့
ဧည့်သည် ပါလာလို့ ဗျ
ဟား ဟား .. ကိုပေကတော့ ပြောတော့မယ် … ။
အဲ့ဒီအိမ်ကလူတွေ ဘယ်သူမှ ဆေးရုံမသွားကြဘူး … ဆေးရုံသွားတဲ့ လူကလည်း အဲ့ဒီအိမ်မရောက်ဘူး … အဲ့လို အဲ့လို
etone ကိုကို့ ဆီကနေ အပြန် ပေါ့
ဘာသာရေးသင်တန်းတစ်ခုမှာတော့ သင်တန်းဆရာမကပြောဖူးတယ်… အဲဒါမျိုးတွေကြားရတာတွေက အပါယ်ဘုံသားတွေက သူတို့ဘ၀ကနေ ကျွတ်ချင်လို့ အမျှဝေတာကို ခံယူချင်လို့ ဒါမျိုးတွေနဲ့ အသိပေးတာလို့ တော့ပြောတာမှတ်သားဖူးတယ်… သူတို့ကို အမျှဝေပေးပြီး သာဓုခေါ်စေခိုင်းရင် ငြိမ်သွားတတ်တယ်လို့တော့ ပြောတာတော့ကြားဖူးတာပဲ
etone ရေ TV ခလုပ်လွတ်တာကောဖြစ်နိုင်လား
မဟုတ်ဘူးဆိုတော့စဥ်းစားစရာဘဲ ကျမသာဆို စိတ်ထဲကတခုခုလို့ထင်တာနဲ့
ခလုတ်လွတ်တာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး စုံစုံရေ .. ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ … အဖွားပြောတာလည်း ကြားခဲ့ပါတယ် .. သူ့အခန်းထဲ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်ဆိုတော့ … ကိုယ်က တစ်ခေါက်ပဲ ၀င်သွားကြည့်တဲ့ အချိန် အဖွားက အိပ်မောကျနေတယ် ..ကျန်တဲ့ အခေါက်တွေ ဘယ်သူဝင်မှာတုန်း ။ မလွယ်ဘူး ရူးနိုင်တယ်
တီဗွီပါဝါကို အဝေးက Remote လုပ်လို့ ရတယ်ဆိုတော့….ပလက်ဖြုတ်ပြီး အိပ်ကြည့်ပေါ့..
ပြောရတော့ ခက်ခက်ပဲနော် ဒါမျိုးဆိုတာက နွယ်ပင်ကတော့ တစ်ခါမှ မကြုံဖူးပင်မဲ့
သူများအပြောနဲ့တင် တော်တော်ကြောက်နေပြီ နွယ်ပင်တို့ အခုနေနေတဲ့ အိမ်မှာလည်း
အဲလိုမျိုး၇ှိတယ်လို့ပြောပင်မယ့် (အိမ်ကလူတွေ တွေ့တယ်လို ပြောပင်မယ့်)
ကိုယ်တိုင်တော့ တစ်ခါမှ မကြုံဖူးဘူး နွယ်ပင်ရဲ့ တစ်ယောက်သောသူကတော့
ဒါမျိုးတွေကို ယုံလဲ မယုံသလို ကြောက်လဲမကြောက်တက်ပါဘူး ဒါပေမယ့်
တစ်နေ့ညကတော့ ည 123း0 သူကိုယ်တိုင် နောက်ဖေးဝရန်တာ ထွက်ရင်းတွေ့လိုက်လို့ အမျှဝေခဲ့တယ်လို့ပြောတယ် နောက်နေ့တွေမှာလည်း ညဘက်တွေဆို
သူတစ်ယောက်ထဲ ထွက်ထွက်ပြီး အမျှဝေနေတာကိုတွေ့တယ် ကိုယ်တိုင်တစ်ခါမှ မတွေ့ဘူးတဲ့ နွယ်ပင်ကတော့ အိမ်နောက်ဖေးကို ည (10) နာ၇ီနောက်ပိုင်း တစ်ယောက်ထဲ
etoneက နင်ကသရဲလားလို့မေးကြည့်လိုက်ပါလား။ ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဘော်ဒါဖွဲ့လိုက်ပေါ့။ ထူးဆန်းတဲ့သူငယ်ချင်းအသစ်ရတာပေါ့။
မနေ့ကသေသွာဲး့ စတိ့ဗ်ဂျော့ကို.. မေးပေးစမ်းပါလို့..။
အခုကမ္ဘာဝမ်းနည်းနေကြသူတွေ.. ဘာပြန်ပြောချင်သလဲ.. လို့..။
အဲဒီအခါ.. မထိတထိနဲ့.. ထထပွင့်တတ်တာပေါ့..။
ဒုက္ခပါပဲ သဂျီးကလည်း … etone လည်း မကြုံဖူးလျှင် ယုံမှာ မဟုတ်တဲ့ လူစားမျိုးပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့… နည်းနည်းဖြုံတယ်သိလား … ။ ကြက်သီးမွှေးညှင်းထတာ တစ်သက်နဲ့ တစ်ကိုယ် အဲ့ဒီအကြိမ် အပြင်းထန်ဆုံးပဲ … :mad:
ရီမု ကတ်နဲ့တာ လုံးဝမဟုတ်ဘူး … ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရီမုတင်ထားတဲ့နေရာရဲ့ ဒါရိုက်ရှင်က တီဗွီနဲ့ ကန့်လန့်ဖြစ်နေလို့ပါ … ။ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေ တကယ်ရှိတာကို လက်မခံချင်လည်း လက်ခံရတော့မယ် … ကိုယ်တိုင် တွေ့ မြင်ခဲ့တာကိုး
ရီမုတ်က သူ့စက်ကွင်းကို အနည်းဆုံး ၅၀ ဒီဂရီလောက် ကျယ်ကျယ်သွားတယ်
ဒါကြောင့် ရီမုတ် ခလုတ် ကပ်နေတတ်တဲ့အခါမှာ ဖြစ်တတ်တာလဲ ရှိပါတယ်
နောက်တစ်ချက်က စချင်တဲ့လူ ရှိရင် time setting နဲ့ starting timing များ လုပ်ထားရင်လဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ် .. အဲဒီအိမ်မှာ အဲဒီလို စချင်တဲ့လူများ ရှိနေတတ်သလား
နောက်တစ်ချက်က တခြား အိမ်နဲ့ ကပ်နေတတ်သလား .. တခြားအိမ်က တီဗီ ရီမုတ်က ဒီ တီဗီကို လာထိတာများလား
ဒါမျိုးက ရီမုတ် door bell မှာ အများဆုံးဖြစ်တတ်တယ် တော်တော် ဝေးဝေး သွားတယ်
ဒို့ အိမ်က ၄ လွှာမှာ .. ၆လွှာမှာ ရှိတဲ့ door bell နဲ့ frequency တူနေတာ မသိတော့ အဲဒီအိမ်မှာ ခလုပ်နှိပ်တိုင်း အိမ်မှာ အသံမြည်တယ် ..
ပထမတော့ ခလေးတွေ လက်ဆော့ တီးပြီး ဆင်းသွားတယ်လို့ ထင်ခဲ့တယ်
နောက်တော့ ခလေးလဲ မတွေ့ပဲ မြည်တော့ ကိုယ့်အိမ်က အတွင်းစက်ကို ဓါတ်ခဲ ဖြုတ်ပြီး အပြင်ခလုပ်ကို နှိပ်ကြည့်တော့မှ ၆လွှာမှာ မြည်နေတာ သိရတယ်
ကိုပေါက်ဖော် ပြောတာ မဆိုးဘူး။ ပလပ်ဖြုတ်ထားလို့မှ တီဗွီလာနေသေးရင်
တော့ ဒါ အမှောင့်ပယောဂဝင်ပြီပေါ့။ဘာဖြစ်လဲ ဆိုတာ တတ်နိုင်သလောက်စစ်
ဆေး၊ ဖြစ်နိုင်သမျှကို စဉ်းစား။ အဲဒါထက်လွန်သွားရင်တော့ paranormal activity
လို့သတ်မှတ်ရတော့မှာပဲ။ကျွန်တော် ရတနာပုံမှာ နေတုန်းက အဖြစ်အပျက်လေး
တွေ ပြန်ရေးပါဦးမယ်။ အဲဒီတုန်းက တယ်လီပို့အဆောက်အအုံကြီးထဲမှာ တစ်ယောက်
တည်း ပိတ်မိသွားဘူးတယ်။ မဖြစ်စဖူး မီးတွေပါ အကုန်ပျက်သွားပြီး တံခါးတွေ တစ်ချပ်မှ
ဖွင့်မရတော့တာ။ပြီးတော့ အဲဒီအချိန် အထဲမှာဆူညံနေတာ တံခါးရိုက်သံတွေ။ မီးပြန်လာ
လို့ကြည့်တော့ နှစ်ပေပတ်လည် ကြွေပြားတွေ ရာချီပြီး အက်ကွဲကုန်တယ်။ မှန်တွေကွဲကုန်
တယ်။ကျွန်တော်က သတ္တိကောင်းကြီးတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။အဲဒီတုန်းက ရူးမသွားတာ
ရုတ်တရက်ဆို သရဲခြောက်တာပဲလို့ ထင်မိတယ်။နောက်
Moe Z ရဲ့ အတွေ့ ကြုံလေးတွေလည်း ပြောပြပါဦး ….
အင်း..ရေးဦးမယ် အချိန်နည်းနည်းရရင် မမအိတုံအားပေးလို့နော်
ဟုတ်တယ် Moe Z ရေ … မယုံတတ်တဲ့ လူတွေ တကယ်ကြုံမှ ယုံကြတယ် .. ။ သဂျီးကိုလည်း … တွေ့ဖူးစေချင်တာ အဲ့လောက်ကို စေတနာထားတာ အဟီး ။
အတွေ့ ကြုံဆန်းလေး … သူများတွေ ကြားဖူနားဝရှိအောင် ရေးပြပါဦးနော် …
တုံရေ အမသာဆို အဖွားအခန်းထဲ ၀င်ပြေးပြီသာမှတ် .. မမြင်ရတဲ့အရာတွေက ပိုခြောက်ခြားတယ်…
တော်ကြာ ဟိုဒင်းမဟုတ်ဘဲ ညီမတို့လိုလူမျိုးနဲ့တွေ့တာဆို ဘယ်နှယ့်လုပ်မလဲ
တခါက သူများအိမ်ထဲကတီဗွီကို အိမ်ကတီဗွီရီမုနဲ့ ကလိနေတာ
အဲဒါအိမ်မှာ အဖေနဲ့ ကြိတ်ရယ်ကြတာ
သားအဖနှစ်ယောက် တစ်ယောက်တစ်လှည် ရီမုနဲ့ကလိနေတာလေ
အဖေကအရင်ပြောတာ သူတို့တီဗွီက တို့တီဗွီနဲ့တူတူပဲတဲ့
အဲဒါနဲ့ ရီမုဘယ်လောက်ဝေးဝေးမိလဲ စမ်းသပ်တယ်ဆိုပြီး နောက်ဖြစ်သွားတာ
ပြတင်းပေါက်ကလည်း တည့်နေတော့ တန်းနေတာပဲ
ပန်းကန်ကိစ္စကတော့ ကြောင်လား ကြွက်လား…
နောက်ဖေးက ဟင်းပန်းကန်ကို လာခိုးစားတာ ကြောင်လတ်မဟုတ်ဘူးနော်။
သူတင်ထားတဲ့ ပို့စ် တစ်ခုထဲမှာဖတ်ဖူးတယ်မလား။
တုံးက တီဗွီပွင့်လို့ ဒေါကန်ခဲ့တာ.. ဆူး ကတော့ ဟိုတယ်မှာ ညအိပ်တာ ၁၂နာရီလောက်မှာ သိသိသာသာ နံရံ ကို ထု နေတာ တယောက်တည်း ကြားတာ မဟုတ်ဘူး တူတူ အိပ်တဲ့ မေမေလည်း ကြားတယ်။ ကြားတာကို ကြားတယ်လို့သာ သဘောထားပြီး ဆက်အိပ်လိုက်ကြတာပဲ။ ညောင်းရင် နားလိမ့်မယ် တွေးပြီး အိပ်တာ တညလုံး မနားဘူး.. အဲဒီနေ့က မနက် ၄နာရီ ထဖို့ အလန်းပေးထားတော့ အိပ်ယာထပြီး မျက်နှာ ထ သစ်တော့ အသံ မထွက်တော့ဘူး ဘယ်ပျောက်သွားလဲ မသိဘူး။ ကျိကျိ ဆိုရင် ကြွက်လို့ ပြောလို့ ရသေးတယ်။ တစုံတယောက် အခန်းထဲမှာ ၀င်ပြီး တခန်းလုံး ပတ်ထု နေသလို ဖြစ်နေတာ.. ဟိဟိ..
အစ်မရေ … နောက်တခါ ကြုံလျှင် ရီကောရင်းလေး လုပ်ပြီး သဂျီးဆီပို့ပေးလိုက်ပါ ..သူက ဒါမျိုးတွေ အယုံကြည်မရှိဘူးလေ … ဟီး
သဂျီး ရဲ့ မီလီယံ ဘီးဇီးနပ် အတွက် အီးတုံး အဘွားအိမ်ကို သွားရင် လမ်းကြုံ တီဗွီ လိုက်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဖမ်းပြီး သဂျီးဆီ ချဉ်ပေါင်ရွက်ကြားထဲ ထည့်ပေးလိုက်မယ်။
ဒါမျိုး ကားသမားဘဝတုန်းကတစ်ခါကြုံဘူးတယ် ၊ညဘက်အိပ်ချင်လွန်းလို့လမ်းဘေးကားထိုးပြီးအိပ်
နေတုန်း ကားစက်နှိုးသံကြားတော့စပယ်ယာကိုလှန်းဆဲတာပေါ့—ဘာလို့လက်ဆော့သလဲပေါ့—တကယ်တော့စပယ်ယာက ကားဘီးလေစစ်နေတာ — ကျွန်တော်ရောစပယ်ယာပါကြားလိုက်တာစတတ်မော်
တာမွှေ့ သံစစ်စစ်၊ကားကတော့နိုးတဲ့အထိမဖြစ်ပါဘူး—နေရာအတိအကျ ပြောရရင်ပေါက်တပင်သင်္ချိုင်းမှာဖြစ်တာ၊ဒိုက်ဦးနားမှာပေါ့–
ပန်ပန်ပြောတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ တယောက်ယောက်က ရီမုတ်သုံးပြီး နောက်နေမယ်ထင်တယ်။ တခုတော့ရှိတယ် ခြံဝင်းလိုမျိုး ဘေးချင်းကပ်အိမ်မရှိရင်တော့ စဉ်းစားစရာပဲ။
ရီမုက တစ်ခုခုနဲ့ဖိထားမိရင်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အိမ်မှာလည်း လိုင်းကြောင့်တစ်ခါတလေ အဲလိုဖြစ်ဖူးပါတယ်။ လေတိုက်ရင် တိုင်ထောင်ထားတာက နေရာလွှဲရင်လည်း အသံအတိုးအကျယ် ဖြစ်တာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
အဟိ .. ဟီးးးးးးးးးးး
ဂယ်တူမှ ပို့ယင် သဂျီးပို့ပေးးးးး
ဘယ်ကိုလဲ ရွှေသူဌေးကြီး ဆာမိ ကားရပ်ပြီး အိပ်မိတဲ့ နေရာကိုလား။